Ma ammaan baa in laga diro lacag Transfer Galaxy? – Transfer Galaxy
Ma ammaan baa in laga diro lacag Transfer Galaxy?
Lacag ka dirida Transfer Galaxy waa mid aad u ammaan ah. Marka hore, waxaan hubinnaa in barteena internetka ay tahay mid ammaan ah. Waxaan isticmaalnaa teknoolajiyada ansaxsan / shahaadeysan ee DigiCert taas oo hubinaya in kombiyuutarkaaga ama taleefankaaga casriga ah uu kaliya la xiriiri doono Transfer Galaxy marka ku xiranka nidaamkayaga la aqoonsaday.
Marka labaad, waxaan kaliya la-hawlgalnaa shirkadaha caalamiga ah ee isgaarsiinta, u hoggaansiga khibrad ku leh, bixiyeyaasha lacag bixinta iyo bangiyada si loo hubiyo in lacagtaada ay ku jirto gacmo ammaan ah.
Marka seddexaad, dhammaan shirkadaha la-hawlgalayaasha ee aan isticmaalno si loo fuliyo lacag bixinta waa inay u hoggaansamaan heerarka adag ee ammaanka iyo xog ilaalinta.